Ungakhula kanjani / ulungisa izinwele？
Izinwele ezomile nezinempilo, lapho isimo sezulu sesomile, ungahlala uzwa umsindo we- “papapa” o-tuli, omubi, ongathandeki futhi ongathandeki. Izinwele ezibushelelezi zizokujabulisa, ngasikhathi sinye, kuzoba nemood eyengeziwe yokujabulela okwamanje. Noma kunjalo, usebenzise iningi lama-conditioners nezinwele ...
Ungayikhetha kanjani imaski ye-coronavirus?
Uyazi ukuthi uluhlobo luni lwamamaski okufanele uluthengele ama-coronavirus？ Imaski yezokwelapha, imaski yokuhlinzwa yezokwelapha, imaski yokuhlinza yezokwelapha, imaski yokuvikela yezokwelapha, i-N95, KN95, 3M, njll. Ngokuphathelene namagama omaskandi, abantu babekhishwa futhi bedidekile. Izinhlobo zemaski ezijwayelekile zingahlukaniswa kathathu ...
Halala u-Hebei Shouzheng Trading Co, i-inthanethi ngokusemthethweni!
Ngabe ufuna impilo yezempilo nenkampani yemikhiqizo yezokwelapha? Ngabe ufuna umkhiqizo okhokhelwayo nethimba lokukhiqiza? Ngemuva kwalokho u-Hebei Shouzheng Trading Co, Ltd. uzoba yisinqumo sakho esihle kakhulu. I-Hebei Shouzheng Technology Co, Ltd ngumenzi wemithi yendabuko yaseChinese ma ...